Fivondronamben'ny Federasiona Ranomasimbe Indiana - ss 4t l0312 lat
Ny endrik'Andriamanitra (1)
Alatsinainy 15 Okt.
Araka ny hitantsika omaly, i Adama ary koa i Eva mazava loatra, dia olona tena nisy ara-bakiteny mihitsy. Tsy mba tandindona izy ireo na koa anganongano fa tena nofo aman-dra natao “araka ny endrik’Andriamanitra” mihitsy. Tsy azo lavina àry fa zavatra tsara sy masina tokoa, ary mametraka tombam-bidy lehibe ho an’ny tenantsika izany hoe nohariana araka ny endrik’Andriamanitra izany. Inona àry anefa no tena hevitr’io?
Vakio amim-pitandremana tsara ny Gen. 1:26. Inona no filazana hita eto fa nisy fikasana mihitsy teo amin’ny famoronana ny olona ho araka ny endrik’Andriamanitra? Izany hoe: nilaza Andriamanitra fa hatao araka ny endriny ny taranak’olombelona, ary dia nisy zava-niseho avy hatrany tokoa taorian’izay? Inona izany, ary ahoana no anampian’io antsika hahatakatra ny hevitry ny hoe: “endrik’Andriamanitra”?
Ny Gen. 1:26 dia fanambarana ny fikasan’Andriamanitra. Namorona ny olona araka ny endriny Andriamanitra ary avy eo dia nisy zavatra nasainy nataony. Toa ilaina eo amin’ny fanatanterahana asa mazava izany famoronana araka ny endrik’Andriamanitra izany. Tsy inona izany fa ny “fanjakana” eo amin’ireo zavatra hafa noharian’Andriamanitra. Noho izany, dia manondro ireo fanomezana ara-batana, ara-tsaina, ara-piaraha-monina ary ara-panahy ny hoe “endrik’Andriamanitra”. Ilaina avokoa ireo mba hahazoan’ny taranak’olombelona manatanteraka ny zava-kendren’Andriamanitra mikasika izany. Na inona hevitry ny hoe “manjaka” amin’ny zavaboary sisa na inona, dia azo antoka fa tafiditra ao anatin’izany ny fanajana, ny fikarakarana ary ny fitantanana mahomby. Angamba ny taranak’olombelona dia natao hifanerasera amin-kafanam-po amin’ireo zavaboary “ambanimbany kokoa” noho izy, ho fanehoana ny fifandraisan’Andriamanitra aminy. Ny hoe nohariana araka ny endrik’Andriamanitra dia midika koa fa natao haneho an’Andriamanitra eo amin’izao tontolo izao ny taranak’olombelona.
Andraikitra goavana manao ahoana tokoa re izany!
Vakio ny Mar. 12:13-17. Ahoana no hanampian’ireo andininy ireo antsika hahatakatra ny hevitr’izany hoe nohariana araka ny endrik’Andriamanitra izany?
Toa tahaka izao ny hafatra misongadina tian’i Jesôsy hampitaina: “‘Omeo an’i Kaisara ny volanareo; hita eo amin’izany vola izany ny sariny ka noho izany dia azy izany. Atolory an’Andriamanitra kosa anefa ny tenanareo. Mitondra ny endriny ianareo, ka noho izany dia Azy ianareo.’” — CT, t. 515.
Ahoana no handikana izany amin’ny fomba mazava tsara? Tsy misy isalasalana fa miseho eo amin’ny fitiavantsika, ny fanoloran-tenantsika sy ny fahatokiantsika Aminy ary ny fomba fitondrantsika ny hafa ihany koa izany endrik’Andriamanitra. Averina indray fa ny nanaovana antsika ho araka ny endrik’Andriamanitra, na inona mety haterak’izany na inona, dia zavatra hita eo amin’ny asa atao mihitsy.